Xildhibaan Cosoble: Waxay Xukumaddu ka shaqeyneysaa burburinta Golaha Shacabka – Kalfadhi
Xildhibaan Cosoble: Waxay Xukumaddu ka shaqeyneysaa burburinta Golaha Shacabka
Xildhibaan Cabdulqaadir Cosoble ayaa u arka in badbaadada kaliya ee uu haysto Golaha Shacabka, qilaafka u dhaxeeya hadda awgii, ay ku xirnaan doonto go’aanka uu qaato Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Cabdiraxmaan, oo siyuu arrintan u xaliyo maalin ka hor dib ugu soo noqday Muqdisho, sida uu isagu horay u sheegay.
Xildhibaan Cosoble waxa uu sheegay inuu socdo, sida uu hadalka u dhigay, qorshe lagu burburinayo Golaha Shacabka, “oo marka hore lagu bilaabayo” buu yiri “baabi’inta Guddiga Maaliyadda ee Golaha”, kaas oo uu kala diray Guddoomiye Kuxigeenka 1-aad ee Golaha Shacabka Cabdiwali Ibraahim Muudey, hase ahaatee waxay Xildhibaanada Guddigu ku doodayaan ineysan taasi sharci ahayn.
“Haddii aan lagu fakan, oo aan lagu badbaadin, Guddoomiyaha Golaha Shacabka, oo uusan tilmaamin sida sharcigu qabo in la raaco, waxaa socota qorshihii Baarlamaankan (Golaha Shacabka) lagu burburin lahaa markan, oo lagu kala diri lahaa” ayuu Xildhibaan Cosoble ka yiri madal uu maanta qabtay Xisbigiisa Ileys.
Xildhibaan Cosoble waxa uu ku eedeeyey Xukumadda Federaalka Soomaaliya (XFS) iney ku bixineyso lacag in la burburiyo Guddiga Maaliyadda, “waxaana u sii dheer” buu yiri “iney handadeyso Xildhibaanada Guddiga, gaar ahaan Hogaanka Guddiga. Waxa uu sheegay in, War-bixin Miisaaniyadeedka 2018-ka ee uu Guddiga Maaliyaddu Golaha dhex keenay 24-kii bishii hore, ay ahayd iney Xukumaddu sheegto meesha wax ka qaldan yihiin, “laakiin ma ahayn” buu yiri “in Baarlamaanka (Golaha Shacabka) dagaal la geliyo”.
“Waxa uu la kulmay Baarlamaaka (Golaha Shacabka) dagaal xoolo (lacag) lagu bixinaayo, dadka qaar loo handadayo sidii Guddigaasi war-bixintiisa loo baabi’in lahaa, isgana loo burburin lahaa, haddii Baarlamaanku (Golaha Shacabku) uu isku dayo inuu hor istaagana isaga naftirkaas loo burburin lahaa” ayuu Xildhibaan Cosoble ku dooday.
Xildhibaanku waxa uu sheegay inuu qabo baqdin ah in haddii uu Guddoomiyaha Golaha Shacabka ku raaci waayo sida ay Xukumaddu rabto ay jagada uu haayo geli doonto qalqal, “si la mid ah sidii ku dhacday Guddoomiyihii hore, Jawaari, oo Baarlamaanka (Golaha Shacabka) saas lagu burburiyo” ayuu yiri Cabdulqaadir Cosoble. Inta uusan arrintan ka hadlin, waxa uu Xildhibaanku ka soo taariikheeyey qaladaadkii ka dhacayey Xukumadda ilaa sanadkii hore.
Kulanka Golaha Shacabka oo maanta markii 4-aad baaqanaya: Sabab?